China Silicone Straps fekitori uye vagadziri | SJJ
Silicone zvinhu hazvisi zvakapfava uye zvinogara kwenguva refu, zvakare yakasimba uye yakanaka pane ductility uye kusagadzikana. Mazhinji mabhande esilicone anoshandiswa zvakanyanya muhupenyu hwedu, senge silicone foni kumashure tambo, silicone lanyards, silicone shoelaces, silicone mabhendi zvichingodaro. Iyo silicone tambo dzakasimba uye dzakaonda ...
Silicone zvinhu hazvisi zvakapfava uye zvinogara kwenguva refu, zvakare yakasimba uye yakanaka pane ductility uye kusagadzikana. Mazhinji mabhande esilicone anoshandiswa zvakanyanya muhupenyu hwedu, senge silicone foni kumashure tambo, silicone lanyards, silicone shoelaces, silicone mabhendi zvichingodaro. Iyo micheka yesilicone yakasimba uye yakatetepa, inobata zvinhu zvacho zvine simba nesimba rekusimba. Iwo marogo anogona kuve akadhirowewa, akadhirowewa kana akaraswa marara akazadzwa nemitezo yesilicone yakasungirirwa, zvakare inogona kugadzirwa pane mamwe masilicone kana maPB tag wozoungana pane tambo dzesilicone kuratidza pfungwa dzako nemifungo. Iyo micheka yesilicone inogadzirwa pamwechete kupenya zvinhu kana mwenje inopenya kuti ive inokwezva uye inofadza. Iko kusanganisa kunoita kuti mabhande esilicone ashande uye asarudzike kukwidziridzwa, bhizinesi, zvipo, mapato, mitambo, zvikoro uye chimwe chinangwa.
Pashure: Silicone Cable Mahwindo
Zvadaro: Silicone Kupeta Makapu